Xerada badbaado oo lagu qabtay nin indha sharer wata
Muqdisho (Keydmedia) - Ciidamada dowlada KMG ah ee ku sugan exkoontarool Afgooye ayaa waxa ay sheegeen in xalay howl gal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada badbaado ay ku xireen nin ku labisan dharka dumarka oo dhex joogay xerada badbaado ee magaalada Muqdisho.
BREAKING NEWS - Shabaab oo Ceelasha Biyaha isaga baxeen!!
Warar Keydmedia Online | 6 August 2011
Muqdisho (Keydmedia) - Kooxda Shabaab oo Xalay laga Saaray Magaalada Muqdisho ayaa Daqiiqado ka hor dib uga guurtay Ceelasha Biyaha.
Madaxdii Shabaab oo u jiheysatay dhanka Bay iyo Bakool
Nairobi (Keydmedia) - Horjoogayaasha maleeshiyada shabaab ayaa u jiheestay dhanka gobalada Bay,Bakool iyo Jubooyinka waxaana la arkayaa saraakiil ay ka mid yihiin cali dheere iyo Shonqole waxaana la sheegay iyaga oo wata gaadiidka raaxada ay sii dhaqaaqeen.
Cali dheere “Darbiyada ayaa noo hiilin doono”
Muqdisho (Keydmedia) - Afhayeenka Shabaab Cali dheere oo qiray in Shabaab lagu jabiyay dagaaadii Muqdisho ka dhacay ayaa sheegay in kooxdooda ay u hiilin doonkaan darbiyada Muqdisho isla markaana ay mar kale ka adkaan doonaan ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom.
Alshabaab oo Muqdisho laga saaray
Muqdisho (Keydmedia) - Kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe laga saaray guud ahaan Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo Sanadihii la soo dhaafay ay gooba badan uga sugnaayeen.
Mr Been oo Isbitaal loola cararay
London (Keydmedia) - Aktartkan oo lagu magacaabo Rowan Atkinson balse caalamka loogaga yaqaano magaca Mr Been ayaa la sheegay in uu shir ku galay isaga oo wato baabuurka nooca loo yaqaano F1 super car deegaanka Cambridgeshire ee dalka Ingiriiska.
WSS & Keydmedia oo wada Mashruuc lagu Afurinayo 480 Qof! (Masawirro)
Muqdisho (Keydmedia) - Waxaa Muqdisho Xaafada Buulo Xuubey ka socda mashruuc afurin dadka danyartaa oo ay iska kaashanayaan Worldwide Somali Students iyo Keydmedia.
Cidamada Dowlada oo Xerada badbaado dad ku laayeen
Warar Keydmedia Online | 5 August 2011
Nairobi (Keydmedia) - Maleeshiyo ka wada tirsan ciidanka Dowlada ayaa ku dagaalantay xerada badbaado ee degmada dharkeyley taasoo dhawaan dowlada ay ku xareysay dhibanayaasha abaarta ee ka soo barakacay gobalada Bay iyo Bakool.
Maleesiyo ka tirsan Maamulka Gobalka Banaadir oo Muqdisho ku dagaalamay
Muqdisho (Keydmedia) - Ciidamo kala taabacsan gudoomiye ku xigeenka gobalka Banaadir ee dhinaca Amniga Warsame Joodax iyo gudoomiyiha degmada Hiliwaa Cumar Jacfaan ayaa ku dagaalamay degmada X.weyne.
Xubna ka tirsan Shabaab oo xukun lagu riday
Muqdisho (Keydmedia) - Maxkamada Ciidamada Milatariga ee dowlada KMG ah ayaa xukun maxkamadeed oo u dhaxeeya 2-10 sano waxa ay ku riday edeysanayaal la sheegay in ay ka tirsanayaan Alshabaab.
C.llahi Shiikh Xasan: Waa la xaday Gargaarkii shacabka
Nairobi (Keydmedia) - C.llaahi Shiikh Xasan oo ka tirsan Soomaalida galaangalka ku leh arimaha Siyaasada ayaa sheegay in gudiga gurmadka abaaraha ee dowlada ay musuq maasuqeen garaagrkii loogu tala galay shacabka dhibanayaasha ah ee ay abaartu saameysay.
Barakacayaasha Xerada badbaado oo bilaabay in ay soo barakacaan
MUQDISHO (KEYDMEDIA) - Barakacayaasha abaarta ee ay dowlada KMG ah isugu geysay xerada Badbaado ee degmamda dharkeyley ayaa bilaabay in ay halkaasi ka soo cararaan isla markaana ay dib ugu laabtaan meelihii hore looga kaxeeyay.
‹ First < 876 877 878 879 880 > Last ›